एयरबस एक्क्समक्स बहु-लेवी मेगा पैक डाउनलोड गर्नुहोस् FSX & P3D - फ्रीवेयर
यो प्याकले एअरबस A14-XXX को 300 मोडेलहरू समावेश गर्दछ (-600R, 600F, ST, B1, B2, B4) र 31 लेभरहरू तल रहेको तालिकामा सूचीबद्ध। प्रत्येक मोडेल यसको 2d प्यानल र कस्टम आवाज संग भर्चुअल कलकपिट जस्तै छ: सामान्य इलेक्ट्रिक CF6-80C2, CF6-50C2 र Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 (जुन JT9D-59A लाई उपलब्ध छैन)। सम्पूर्ण विमानमा 27 अनुकूलित दृश्यहरू समावेश गर्नुहोस्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं यसलाई सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण: यी हवाई जहाजको अपरेसनको साथ आफैलाई परिचित गर्न म्यानुअल पढ्न निश्चित हुनुहोस् FSX or P3D.
+ डीएचएल युरोप
+ यूपीएस / संयुक्त पार्सल सेवा + अमेरिकी वायु सेवा
+ थाई एयरवेज अन्तर्राष्ट्रिय
+ एयर फ्रान्स
+ शाही जोर्डिनियन एयरवेज
+ कतार एयरवेज - पुरानो रंग
+ साउदी अरब एयरलाइन्स
+ ईजियन एयरलाइन्स
+ ओलम्पिक एयर
+ चीन पूर्वी वायु सेवा
+ चीन दक्षिणी एयरलाइन्स
+ इरान एयर
+ महन एयर (2 liveries) + हाउस रंग + रोलआउट रंग
+ ट्रांस युरोपेली एयरवेज - चाय + Lufthansa
+ महन एयर (2 liveries) + Aerounion
+ एयर जमाइका
+ महन एयर (2 liveries)
+ पान अमेरिकी विश्व एयरवेज
+ स्कैंडिनेवियाई एयरलाइन्स - पुरानो रंग
Airbus शून्य जी संग समावेश !!!
सिर्जना 22 अक्टोबर 2013
थमस रूथ र उनको टीम / सहयोगीहरू, माइक Maarse द्वारा सुनिन्छ लुइस Quintero द्वारा repack